Ngokubanzi - Iindaba Zokuhamba | Iindaba Zohambo (Iphepha 3)
Yintoni ongayibona eStrasbourg
Sikuxelela yonke into ukuba ikhona kwisixeko esihle saseFrance iStrasbourg, kunye necawa yayo endala, izikwere kunye nePetite France.
IChueca yenye yezona ndawo zidumileyo eMadrid. Ngomphefumlo wezizwe ngezizwe, igama lalo li ...
Xa kufikwa ekuhambeni ngenqwelomoya, enye yeengxaki eziqhelekileyo abahamba rhoqo kumava kukubhukisha ngaphezulu….
Intengiso yaseSan Miguel eMadrid
Sikubonisa yonke into uMercado de San Miguel angakunika yona entliziyweni yaseMadrid, indawo esemgangathweni yokutya.
Sikuxelela zonke iinkcukacha zeTower Hercules edumileyo, indlu yesibane yokomfuziselo yesixeko saseA Coruña kunxweme lwaseGalicia.
Yintoni ongayibona eSegovia
Sikuxelela iindawo ezinomdla ekufuneka uzibonile kwisixeko saseSegovia, ukusuka kumjelo wamanzi ukuya kwiAlcázar entle okanye izikwere zedolophu yakudala.
Iplanethi yethu inkulu ngendlela emangalisayo kangangokuba zininzi izinto ezinomdla kwihlabathi ezisinceda ukuba siqonde inkcubeko ...
Amachibi aseCovadonga e-Asturias
Sikubonisa yonke into onokuyibona kummandla wamachibi aseCovadonga akwiPicos de Europa, kwiPrincity of Asturias.
Yintoni ongayibona e-El Retiro Park
Sikubonisa ezona ndawo ziphambili zomdla ezinokubonwa kwindawo eyaziwa ngokuba yi-El Retiro Park embindini weMadrid.
Enye yeepaki ezintle eMadrid kwaye eyona ingaziwayo yi-El Capricho Park. Imalunga…
Sithetha ngeeParadores eGalicia, uthungelwano lweendawo zokuhlala ezikwizakhiwo zembali okanye izakhiwo ezinomdla okhethekileyo kwinkcubeko.
Undwendwela njani iParc Güell
Ilifa lala maxesha lika-Antonio Gaudí e-Barcelona liyamangalisa: Casa Batlló, Sagrada Familia, Casa Milà… Ngaphandle…
Sikuxelela indlela yokufika apho kunye nayo yonke into enokubonwa kwiiDrach Caves ezaziwayo kwisiqithi saseMallorca, esisePorto Cristo.
Nikezela ngokuya eBerlin nabahlobo: Indiza + ihostele yee-euro ezingama-80
Isibonelelo esibandakanya ukubhabha ngenqwelomoya kunye nokuhlala ubusuku obuthathu ngeeyure ezingama-80 ukuya eBerlin yinto esingenakuphoswa yiyo.
Isebenza njani imigaqo-nkqubo yokurhoxisa uhambo
Kule mihla, abantu abaninzi benza ukuqesha iholide zabo kwangaphambili, bethathela ingqalelo izinto ezinje ...
Iwotshi yeenkwenkwezi yasePrague luphawu lwesizwe, ikratshi kunye nomtsalane wesixeko. Bala i ...
Amanxuwa amaRoma abaluleke kakhulu
Sikubonisa amanye amanxuwa amaRoma obukhosi baseRoma anokutyelelwa kumazwe ahlukeneyo.
Maninzi amazwe kwaye ngenxa yoko zininzi iimali. Njenganamhlanje amanye amazwe aseYurophu abelana nge ...
Ukuya phi ukuze ufunde isiNgesi
Esona sibonelelo sokufunda ulwimi kukwazi ukunxibelelana nabanye, ke xa ufunda ulwimi ...
Iindawo zemetro zaseMadrid
Yonke imihla amawaka abantu athabatha iMetro yaseMadrid ukuze ajikeleze kwikomkhulu laseSpain. Imalunga…
Ezona ntengiso zeKrisimesi zibalaseleyo
Sikubonisa ezona ntengiso zeKrisimesi zibalaseleyo eYurophu, ezidolophini nakwizixeko ezihlala ixesha leKrisimesi ngokupheleleyo.
Iimarike ezilungileyo eSpain
Ngaphandle kokunyuka kwezorhwebo kwi-Intanethi, iimakethi zesiko zigcina loo nto ibenza ukuba babe ...
Ukunikezelwa ngeveki eMilan, indiza kunye nehotele
Impelaveki eMilan ingabiza kancinane kunokuba ucinga. Kungenxa yoko le nto sikuphathela le ntengiso yobusuku obuthathu kunye nenqwelomoya ebandakanyiweyo.
Sikuxelela iinkcukacha ofuna ukuzazi malunga nePatio de los Leones enomtsalane ebekwe eAlhambra eGranada.
Yintoni ongayibona eVenice
Sikubonisa amanqaku aphambili anomdla kwisixeko saseVenice, isixeko esaziwa ngemijelo kunye nezikhumbuzo zaso ezintle.
Yintoni ekufuneka uyijongile xa uqesha ikharavani
Sikunika izikhokelo kunye nemibono embalwa xa uqesha ikharavani, isithuthi esifanelekileyo kuhambo lwendlela.
Yonwabela iBuda castle
Ukutyelela kwisixeko saseBudapest kubandakanya ukuhamba ngeNqaba yeBuda, ekwabizwa ngokuba yiNdlunkulu ...
Yintoni ongayibona eZagreb, eCroatia
Isixeko saseZagreb likomkhulu laseCroatia kwaye sinika iindawo ezininzi ezinomdla kwidolophu yakudala, esiza kukufumanela yona.
Amachibi e-Plitvice eCroatia
Sikunika zonke iinkcukacha ukuze ube nakho ukutyelela iPlitvice Lakes Natural Park eCroatia, indawo entle entle.
Umnyhadala wokuKhanya eBoimorto
Fumanisa yonke into malunga noMthendeleko wokuKhanya okumangalisayo kwidolophu yaseCoruña yaseBoimorto, kwindawo esemaphandleni eza kubakho rhoqo ngoSeptemba.
Iimyuziyam ezidumileyo zaseSpain kwi-Instagram
Uphengululo lweemyuziyam ezidumileyo zaseSpain kwi-Instagram. Enkosi ngokukhankanywa komsebenzisi, baye baba ngamanqaku aphambili okutyelelwa.
Khalisa kunyaka omtsha eCyprus
Usenexesha lokuzinika ithuba lokubaleka kakhulu. Khalisa kunyaka omtsha eSipro! Uhambo olungalibalekiyo kwaye lubiza kancinci kunokuba ucinga.
Amatikiti aya kwiimyuziyam zaseVatican
Ifumaneka entliziyweni yeRoma, isixeko esingunaphakade, iVatican lelona lizwe lincinci kulo lonke elaseYurophu kwaye ...
Iimfihlo kunye neenkcukacha zekholamu kaTrajan
Sikuxelela zonke iinkcukacha zekholamu kaTrajan, ebekwe eRoma, ebonelela ngoncedo olusisiseko olubalisa ngamadabi kaTrajan.
Yintoni ongayibona eNew York
Sikubonisa amanqaku aphambili anomdla kwisiXeko saseNew York, ukusuka kwi-Statue of Liberty ukuya kwi-Empire State Building.
ISenda Viva, ipaki enkulu yosapho enkulu eSpain
Ecaleni kweBárdenas Reales yiSenda Viva, ipaki enikezelwe kulonwabo lwasekhaya eyaziwayo njengeyona ...
I-Camperized van, umbono omkhulu wokuhamba
Fumanisa zonke izibonelelo kunye nentuthuzelo ye van enkulu yecamper van, efanelekileyo kuhambo olufutshane lweempelaveki.
NgoLwesihlanu omnyama: iintsuku ezi-4 eMalta ngexabiso elifanelekileyo
NgoLwesihlanu omnyama usishiya nesipho esihle ngolu hlobo. Le yindiza kwaye ihlala eMalta kangangeentsuku ezi-4 ngexabiso, iphantse yahlekisa.
Iimpawu zeehotele ngaphandle kwabantwana
Sikuxelela zonke iinkcukacha zeehotele ngaphandle kwabantwana okanye ezabantu abadala kuphela, iindawo ezizodwa kwezokhenketho ezijolise kubantu abadala nakwizibini ezitshatileyo.
Lacuniacha, indalo ekhanyayo
I-Lacuniacha ligama lendawo ekhethekileyo kunye negqibeleleyo yabo bonke abathandi bendalo. Yipaki yezilwanyana zasendle, ke ukuba uyazithanda, ngaba uyazithanda izilwanyana kodwa akuthandi zoo? Emva koko ndwendwela ipaki yezilwanyana zasendle yaseLauniacha, eAragon. Iparadesi yokwemvelo!
Eyona spas yokuphumla
Sikunika imikhondo malunga nezona spas zibalaseleyo kunye nezixeko ezishushu eSpain naseYurophu, kunye neehotele zokundwendwela kunye nokuphumla.
Yintoni ongayibona eAndorra
Ilizwe laseAndorra lidume ngokuma komhlaba weentaba kunye neendawo zalo zokutyibilika ekhephini, kodwa linomtsalane ngakumbi, njengemyuziyam.
Yintoni ukhuko lokulala esofeni
I-Couchsurfing yindlela yokuhlala simahla naphi na emhlabeni ukuba ...
Yintoni ongayibona kwintlambo yaseLoire
Sikubonisa izixeko eziphambili zeLoire Valley, kunye neenqaba zayo ezintle nezibalulekileyo kwindlela yeenqaba.
Ukuzulazula phesheya: phi, nini kwaye ngexabiso elingakanani
Ngaba uhambela kwelinye ilizwe kwaye ufuna ukusebenzisa iselfowuni? Fumanisa ukuba yintoni na ukuzula, kubalwa kangakanani, kwaye kufuneka uthathele ingqalelo ukuthintela ukoyikeka kwityala lakho.
Fumana uhambo lweKrisimesi emangalisayo
Sikunika ezinye izimvo kulo nyaka ukuze ube nakho ukonwabela iKrisimesi emangalisayo kunye neendawo onokufumana kuzo eli xesha ngendlela eyahlukileyo.
Imidaniso yehlabathi eyothusayo
Inkcubeko siseti yenkcubeko yabantu eyakha ubume bayo kwaye idluliselwa ukusuka kwisizukulwana ukuya kwisizukulwana ...
Iindlela ezintathu zokunyuka intaba eGalicia
Fumana iindlela ezintathu ezintle kunye neendlela ezizodwa zokuhamba uhambo olude eGalicia, ezilungele ukumangaliswa ziindawo ezintle zendalo.
Ungazilungiselela njani iholide zosapho
Sikunika iingcebiso zokucwangcisa kunye nokucwangcisa iholide yosapho elungileyo ukuze wonke umntu ayonwabele ngokulinganayo.
Izicwangciso zabantwana eMadrid
Abo bazokuchitha iintsuku ezimbalwa nosapho eMadrid ngokuqinisekileyo baya kufuna ukwenza izicwangciso nabantwana, kuba ...
Izikhumbuzo ezibaluleke kakhulu kwihlabathi kufuneka zivakatye ubuncinci kanye ebomini bakho, ke siza kwenza uluhlu olufutshane.
Ngaba izixhobo zam zombane ziya kusebenza kwamanye amazwe?
Kweli hlabathi lixhume ngokupheleleyo kunzima ukuhamba ngaphandle kwezixhobo ze-elektroniki: iifowuni eziphathwayo, iitafile, iilaptops, iikhamera ...
Ukuhamba ngenqanawa ngenqanawa yeyona ndlela ifanelekileyo yokujonga uhambo lwasemva komtshato, njengoko ibonelela ngezinto ezininzi kunye neendawo oya kuzo.
Yintoni ongayibona eTrujillo
I-Trujillo sisixeko sase-Extremaduran esinembali ebalaseleyo, ke sinamabhotwe, iicawa kunye no-Sodolophu wePlaza onomdla.
Siya eBudapest ngeyure ezingama-40
Ukuba ucinga ukubaleka iintsuku ezimbalwa, eli lelona thuba lakho lilungileyo. Ukubhabhela eBudapest ngeyure ezingama-40 kunye nendawo yokuhlala enexabiso eliphantsi. Masihambe?.
Ibhotwe leDukes le-Infantado, eGuadalajara, sesona sakhiwo sihle kwisixeko saseCastilian-La Mancha. Ubhengeze ilitye lesikhumbuzo ...
Izikhumbuzo eziphambili zaseRoma
Izikhumbuzo zaseRoma zininzi kakhulu kwaye ngaphandle kwamathandabuzo kufuneka ukuba kwenziwe uluhlu ukuze kungashiywa ngasemva kuhambo oluya esixekweni.
Izibonelelo zokubhukisha uhambo kwangaphambili
Ukubhukisha uhambo kwangaphambili kunokuba noluhlu lwezibonelelo ezaziwa kuphela ngabacwangcisi abaninzi, ezinje ngokulondolozwa okubalulekileyo.
Inqwelo moya eya eVenice ngee-euro ezingama-60 kuphela
Isibonelelo sendiza esingabonakaliyo yonke imihla. Ke ngoko, ukuba ubucinga ngokuya eVenice, nali ithuba lakho elihle. Ngaba uza kuyiphosa?
I-Melika lilizwekazi elityebile kwinkcubeko nakwimbali kwaye icandelo eliphambili linelifa elikhulu leMayan elingaphelelanga eMexico, njengelinye ilizwe laseGuatemala elinomhlaba otyebileyo ngamasiko nezithethe, eminye yemvelaphi yangaphambi kweSpanishi, abanye bazuza ilifa Speyin. Yothusa nabo!
Izicwangciso zempelaveki nabantwana
Izicwangciso zeempelaveki kunye nabantwana zenzelwe ukuba lonke usapho luyonwabele, ke siphakamisa iimbono ezahlukileyo nezonwabisayo.
Bhabhela eIbiza nge-euro ezi-8 kuphela
Sisibonelelo esibhabha, kwaye asikaze sithethwe ngcono. Kuba uhambo oluya eIbiza nge-euro ezingama-8, uhambo olujikelezayo, alusoloko lubonakala. Ziphathe ngokwakho!
Yintoni ongayibona eWarsaw
IWarsaw ilikomkhulu lePoland kwaye inembali eninzi emva kwayo, kodwa ikwanokunika abakhenkethi.
Uhambo oluvuthuzayo oluya eBangkok ngemali encinci kunokuba ucinga
Sikushiya ngesibonelelo esikhethekileyo esiya eBangkok. Bhabha ngaphezulu kwehotele ngemali encinci kunaleyo unayo engqondweni. Sukuphoswa yiyo!.
Indiza + ihotele eTenerife nge-174 euro
Sebenzisa eli thuba oza kuthi ulichithe iintsuku ezi-3 eTenerife nge-174 euro, apho zombini iindiza kunye nehotele sele zibandakanyiwe.
Iiflayithi ezingenasiphelo zokuhamba zitshiphu
Iindiza ezingafikanga kwindawo ezinokubakho zinokwenzeka ukuba zikwazi ukuhamba ziye kwiindawo ezininzi ngohlahlo-lwabiwo mali olunqongopheleyo, ukufumana izivumelwano ezilungileyo.
Njengomphumo womxube weenkcubeko, kwinkqubo eyadlula kwiinkulungwane ezininzi, inkcubeko eyahlukileyo yazalwa yinto enkulu ...
Amasiko ase-Australia anento yokwenza neNgilane, kuba lilizwe elinabathanjiswa elinabaphambukeli abaninzi kunye neenkcubeko ezahlukeneyo.
Amasiko aseJamani asixelela okuninzi malunga nendlela yabo yokuphila kunye nobuntu bamaJamani, into ebalulekileyo ukuhamba apho.
Amasiko aseMzantsi Korea
Ixesha elithile ngoku, mhlawumbi ishumi leminyaka ngoku, uMzantsi Korea ubekwimephu yehlabathi yenkcubeko edumileyo. Ngoba? Ngenxa yesimbo sakho somculo, uza kuya eMzantsi Korea? Ngokuqinisekileyo uyayithanda idrama kunye ne-k-pop kodwa ngaphambi kokuba ubeke unyawo apho, ungathini malunga nokufunda okuthile malunga namasiko aseKorea?
Xa silungiselela uhambo zininzi izinto ekufuneka sizicingile ukuze yonke into ihambe ...
Amasiko aseIreland atyebile kwaye ahlukahlukene, exutywe ikakhulu nenkcubeko yamandulo yamaCelt esaseleyo.
IArgentina lilizwe labaphambukeli, nangona ijografi yayo ibanzi kangangokuba kuxhomekeke kwindawo oya kuyo uya kuba nakho ukudibana namasiko oya eArgentina kwaye ufuna ukwazi okungakumbi? Emva koko yazi amanye amasiko abo, ukutya, iziselo eziqhelekileyo, izimo zengqondo kunye namasiko asekuhlaleni.
IJapan yeyona ndawo ndiyithandayo, ndingathi indawo yam emhlabeni emva kwelizwe lam. Ndiyayithanda iJapan, kangangokuba bendiseholideyini kwezi zintathu zokugqibela.Uya eJapan? Emva koko fumanisa malunga nezona zithethe zibalulekileyo zaseJapan ukuze wazi ukuba ungasabela njani kuzo. Kwaye zeziphi ongenakuzenza!
Xa kufikwa ekutyeni, abantu baseMexico banelizwi elithi "isisu esigcweleyo, intliziyo eyonwabileyo." Noba kutheni…
Iimuvi zaseMelika kunye nothotho zisibonise amasiko abantu baseMelika kwizihlandlo ezininzi. Singanakho ...
I-gastronomy yase-Itali ineezitya ezijikeleze umhlaba kunye nokuduma kwazo kunye nezinye ezimnandi.
IFransi ine-gastronomy eyaziwayo, ngaphezulu kokuzimisela ukukwamkela njengoko ungcamla. Ukusuka kwi-pastry egqibeleleyo ukuya kwi-rustic elula. Ngaba uya eFrance? Ukongeza kwiimyuziyam kunye neenqaba kukho i-gastronomy yayo. Ukupheka i-Fracnese kuyamnandi kwi-sweet and salty. Ukutya!
Imithwalo yesandla kwiinqwelomoya, into ekufuneka uyazi
Umthwalo wesandla unemithetho ethile kunye namanyathelo ekufuneka elandelwe, ke kubalulekile ukuba ucace malunga neemfuno zawo.
Isinxibo esiqhelekileyo selizwe sisampulu yenkcubeko kunye nembali yaso. Kwimeko yaseColombia, intsomi ...
Ipaki yendalo yeNacedero del Urederra eNavarra isinika indawo yendalo yobuhle obukhulu ukonwaba nosapho.
Kukho ukhetho olukhulu kwiingubo eziqhelekileyo zase-Italiya, kunye neziqwenga ezivela ku-Renaissance, inkuthazo yamaRoma, kunye nezinxibo zaseVenice.
Iintsuku ezine eNew York ngemali encinci kunokuba ucinga
Sikuzisa isithembiso sohambo oluya eNew York, ngexabiso eliphantsi kunokuba ucinga. Uhambo lweentsuku ezine oluya kukwenza uthandane.
Utyelelo kwiiCave zeArtá eMallorca
Imiqolomba yakudala yaseArtá ibekwe eMallorca kwaye inikezela utyelelo olunomdla kwesi siqithi, kunye neendlela zakudala.
Izambatho eziqhelekileyo zaseMexico
Izambatho eziqhelekileyo zelizwe, njenge-gastronomy okanye umculo, zibonakaliso zemveli. NONE
Yintoni ongayibona kwiVila Real de Santo Antonio
Idolophu yasePortugal yaseVila Real de Santo Antonio yindawo ethe cwaka enamabhishi amahle akummandla weAlgarve.
Iidolophana ezintle kwiSierra de Huelva
Kwi-Sierra de Huelva kukho iilali zobuhle obukhulu, ezikwanendawo ezininzi zembali ezinomdla.
Ukuya eParis yothando nge-euro ezingama-17
Ukuba ufuna ukuya eParis ngexabiso eliphantsi, ungaphoswa sisibonelelo esikubonisa sona namhlanje. Inqwelomoya kunye nehotele ziya kukuqinisekisa.
Ukubalekela eLondon usuku ngeeyure ezingama-25
Ngoku ungabalekela eLondon usuku kangangee-euro ezingama-25 kuphela. Ithuba elikhethekileyo ongenakuphulukana nalo!
Bhabha uye eAmsterdam ngee-euro ezingama-65 kuphela
Ngoku ungabhabhela eAmsterdam ngaphantsi kokucinga. Uya kuba neveki yokufumana zonke iikona zayo. Masihambe?.
Yintoni ongayibona eRonda
URonda sesinye sezona zixeko zindala nezona zintle eSpain. Ime kwiphondo laseMalaga kwaye ...
Bhabha uye eMallorca ngee-euro ezili-12 kuphela
IMallorca yenye yeendawo eziphambili zokuchitha iiholide zakho. Ukuba ufuna ukuhlawula imali encinci, ungaphoswa sesi sibonelelo sikhulu seentsuku ezisi-8.
Ukuhamba ngeRío Mundo eAlbacete
Phakathi kweSierra del Segura kunye neSierra de Alcaraz, eAlbacete, yiLos Calares Natural Park ...
Imyuziyam yoTshokholethi, iklasikhi kumazwe aliqela
Yonwabela iMyuziyam yoTshokholethi, iziko elikhoyo kumazwe aliqela kunye nezinto ezinomtsalane ezahlukeneyo okanye imiboniso yokwabelana nosapho.
Unikelo lweentsuku ezi-5 lokonwabela iPrague
Uhambo lweentsuku ezintlanu ngoJulayi kunokuba yinto enkulu. Kodwa ngoku akusekho, silifumene ixabiso elifanelekileyo lokuzonwabisa ePrague, isixeko esimangalisayo.
ISierra Magina Park yaseJaén
Ipaki yendalo yeSierra Mágina isinika ubume bendalo ngobuhle obukhulu, iindlela zokunyuka intaba kunye neelali ezincinci ezinenqaba.
Iipinchos zaseBasque, isithethe esipheleleyo sokutya
Iipinchos zaseBasque ziyinxalenye yomtsalane oshukumisela abakhenkethi abaninzi ukuba batyelele ilizwe elihle laseBasque, kunye nokutya okumnandi okunokungcamlwa kwiziluma ezincinci.
Ndwendwela iCaldera de Taburiente
Ngaba uya kwiiCanary Islands ngeli hlobo? Emva koko uthathe ukhenketho lwesiqithi saseLa Palma kwaye wazi i-Caldera de Taburiente emnandi. Kukhulu kwaye kuhle!
IRoma ehlobo, thabatha ithuba lokuhamba ngenqwelomoya kwi-euro ezingama-60
Ehlotyeni sinokuthatha uhambo ngemali encinci kunokuba sicinga. Kule meko, siza kuya eRoma, kwiintsuku ezimbalwa, nakwii-euro ezingama-60. Yonwabela into enje ngoba ayizukuhlala ixesha elaneleyo ukuba ucinge kabini. Lungisani iibhegi zenu!
Ukuhamba simahla njengevolontiya
Ukuhamba simahla njengevolontiya ngelixa sibona umhlaba unokwenzeka, kuba kukho iinkqubo zokuzithandela kumazwe amaninzi nakwiimishini ezahlukeneyo.
Ukuhamba ngenqwelomoya kunye nokuhlala ubusuku obubini eMarrakech ngee-euro ezingama-60
Ukuba ubuceba ukwenza into yokubaleka, lelona xesha lilungileyo lifikile. Ukuhamba ngenqwelomoya kunye nokuhlala ubusuku bobabini eMarrakech kuya kukuxabisa i-euro ezingama-60. Ngaba ayisiyondlela ilungileyo yokubeka bucala rhoqo iintsuku ezimbalwa?
Ndwendwela olona lwandle lubalaseleyo eThailand
Fumanisa ukuba zeziphi iilwandle ezintle eThailand ongafanele uziphose kuhambo lwakho lweli lizwe lihle, ukusuka kwezona zixakekileyo ukuya kwezingakhange zonakaliswe.
Sithini isiqinisekiso sokugonywa kumazwe ngamazwe?
Nokuba siyintoni na isizathu sohambo lwakho, kufuneka kusoloko kuthathwa amanyathelo okunyamekela impilo yethu. Ingakumbi xa…
Yintoni esinokuyibona eRoma kwiintsuku ezi-3
Ukutyelela iRoma ngeentsuku ezintathu kunzima, kodwa siyakuxelela into onokuyibonisa ibalulekile ukuze ukwazi ukugubungela yonke into.
I-Wadi Rum, utyelelo kwintlango yaseJordani
Intlango yeWadi Rum ibekwe eJordani kwaye yenye yezona ndawo zinomdla kubakhenkethi emva kwePetra, intlango apho kuya kwenziwa khona imisebenzi emininzi.
Ukutyelela amachibi aseSomiedo e-Asturias
Amachibi aseSomiedo ase-Asturias, kwi-Somiedo Natural Park kwaye anokubonwa ngenxa yemizila ethile yokunyuka intaba.
Amawa eLos Gigantes eTenerife
Amawa eLos Gigantes eTenerife abe yenye yezona ndawo zinokhenketho, njengoko zibonelela ngamava apheleleyo nanomdla.
I-10 yeelwandle ezilungileyo kakhulu eTenerife
Ezi zezinye zeelwandle ezili-10 ezilungileyo eTenerife, iilwandle ezinkulu ezinesanti ezibonisa ubuhle bendalo yesi siqithi.
Eyona mihlaba mihle e-Barcelona
Olunye lolonwabo oluziswa yintwasahlobo kukuhlala kwithambeka ukuze ube nesiselo esihle ...
Ukutyelela kwiSixeko esithandekayo saseCuenca
Ukuba awusazi isiXeko esiCociweyo saseCuenca, uphoswa luhambo olunomdla olwenzeka kwindawo yendalo enika amatye amangalisayo.
Yintoni ongayibona kwisixeko saseLeuven
Isixeko saseLeuven simi nje kwiikhilomitha ezimbalwa ukusuka eBrussels kwaye lutyelelo olululo ukuze sazi esi sixeko saseyunivesithi sinokunikela kakhulu.
Ukuba uyalithanda ibali lika-Count Dracula, ungandwendwela i-Bran cast yaseRomania ... kwaye uchithe ubusuku obungalibalekiyo beHalloween!
Yintoni ongayibona eNerja, idolophu yabakhenkethi emazantsi
Fumanisa yonke into onokuyibona kwidolophu entle yaseMalaga yaseNerja, eyaziwa ngokuba yiBalcón de Europa kunye nemiqolomba yayo yakudala.
Yintoni ongayibona eVerona
Isixeko sase-Italiya iVerona asiyondawo apho iRomeo noJuliet bekufanele ukuba bahlala khona, kodwa ikwabonelela ngezikhumbuzo kunye neecawe zokutyelela.
Iziqithi zeLofoten, iparadesi eNorway
Ngaba uceba into ekhethekileyo ngePasika? Kuthekani ngokuya eNorway? Apho, ngaphezulu kweArctic Circle, kukho iziQithi zeLofoten ezintle.
Iilwandle ezintle kwiAsturias
Fumana iilwandle ezintle kwiAsturias, iilwandle ezikunxweme oluhle lwaseAsturian, ezingqongwe zizithuba zendalo, ezinye ezizodwa emhlabeni.
Sintra, yintoni ongayibona uyenze kwisixeko sasePortugal
Fumanisa ukuba yintoni ongayibona kwaye uyenze kwisixeko sasePortugal iSintra, umgama omfutshane ukusuka eLisbon, idolophu egcwele amabhotwe kunye neendawo zendalo zobuhle obukhulu.
Kwi-2018 umboniso ophambili malunga nomfanekiso kaJRR Tolkien uza kubanjelwa e-Oxford ethembisa ukutsala ...
Fumanisa yonke into onokuyibona kwisixeko saseSeville, ukusuka kwiGiralda eyaziwayo ukuya kwindlu yecawa yayo okanye kwiMyuziyam enomdla yeFlamenco Dance.
Ihlabathi libhiyozela uNyaka oMtsha waseTshayina ka-2018 ngesitayile
NgoLwesihlanu ophelileyo uluntu lwaseTshayina lubhiyozele unyaka omtsha, ngakumbi i-4716 ngokwekhalenda yayo, eyona holide yesiko ...
Ukungabikho kolwazi kubeka uNazca emngciphekweni
EPeru, phakathi kweedolophu zaseNazca nasePalpa, enye yezona mfihlakalo zaziwayo zakudala ikhona ...
Ikhadi leGold American Express, yenye yezona zinto zibalaseleyo zokuhamba
Ikhadi leGold American Express, enye yezona zinto zibalaseleyo zokuhamba, kwaye apha sixelela uthotho lwezibonelelo oya kuba nazo.
ICathedral yaseJusto eMejorada del Campo, iAsethi yomdla weNkcubeko?
Ukusuka kwilitye lokuqala elibekwe ngo-Okthobha u-1961 ngomhla we-Virgen del Pilar kude kube namhlanje, i ...
I-5 zokusebenza eziza kukunceda uququzelele uhambo lwakho
Ezi zii -apps ezi-5 eziza kukunceda ucwangcise uhambo lwakho: izithuthi zikawonke-wonke, imozulu, indawo yokuhlala, umguquli kunye neengcebiso zokundwendwela.
Iindawo ezi-6 zaselwandle zaseYurophu zokubalekela kuzo
Fumana ezinye zeendawo ezintle zaseYurophu zokubaleka ukhangele iilwandle ezintle kunye namanzi acwebezelayo.
Ukuba kukho umdlalo ophakanyiselwe kudidi lwezinto zehlabathi nezigidi zabalandeli kwihlabathi liphela ...
Kutshanje i-CNN ipapashe uluhlu lweendawo ezili-12 ekufuneka abakhenkethi baziphephe ngelixa bekwiholide ...
Ndwendwela indawo yeendunduma zaseCorrubedo eGalicia
Indunduma yaseCorrubedo imi eGalicia, kwidolophu eselunxwemeni iRibeira kwaye inikezela ngeendawo zendalo zobuhle obukhulu.
Ngaba awuzange uphuphe ngokuhamba uye kwiiAzores?
Namhlanje sikulethela intengiso entle kwiiAzores Islands. Ukuba uhlala ufuna ukuya kubo eli lithuba.
I-Ryanair ivula umgaqo-nkqubo wayo omtsha ophikisayo
NgoJanuwari 15, iRyanair yaqalisa ukusebenza umgaqo-nkqubo omtsha wokuthintela umthwalo, ongayi kuvumela ukulayishwa ...
Ngokuqinisekileyo iSt.Mark's Square, ngokuqinisekileyo, luphawu lwembali lweVenice. Rhoqo ngonyaka malunga nezigidi ezingama-40 zabantu ...
Uyicwangcisa njani kwaye uyonwabele uhambo lwemoto
Ukuthatha uhambo ngemoto kunokuba yinto eyonwabisayo nenomdla, kodwa kuya kufuneka uthathele ingqalelo izinto ezimbalwa zokuyicwangcisa.
Iihotele zomkhenkce kwihlabathi ngamava ahlukileyo
Iihotele ze-Ice sisiphakamiso esinomdla kakhulu kwaye sinokufumana ngakumbi nangakumbi, phantse zonke zenzelwe ixesha lasebusika.
Iipizza ezinkulu ezi-5 zokutya ipitsa yeNeapolitan eMadrid
Kunika umdla ukuba ukutya okwakuzalelwe ukuthomalalisa indlala yabona bantu bahlelelekileyo eNaples kudlulile ...
Izizathu eziphambili zokungahambi rhoqo
Kwinqaku lethu namhlanje, sichaza ezinye zezizathu zokungahambi rhoqo kunabantu baseSpain. Ngaba ungomnye wabo?
Izipho ezili-10 eziluncedo zabahambi abangahambiyo
Kulungiselelwe nina nosapho okanye abahlobo abangabahambi, olu luluhlu lwesipho ukwenza ukuba uhambo lwakho lube mnandi ngakumbi.
Ndwendwela u-Oslo, yintoni oza kuyibona kunye nokwenza kwikomkhulu laseNorway II
Sikubonisa ezinye izicwangciso ezininzi zokongeza kutyelelo lwakho kwisixeko saseOslo, indawo egcwele iimyuziyam kunye nokuzonwabisa okhethekileyo.
I-ice rinks apho ungonwabela khona ukutyibilika eMadrid ngeKrisimesi
NgeKrisimesi, iintsapho ezininzi zifuna ukuthatha ithuba lekhefu labantwana babo ukuze bahlekise kunye nezicwangciso ezahlukeneyo kunye. Ewe…
Qalisa unyaka eParis ngale ntengiso incinci
Namhlanje, ngobusuku beKrisimesi, sikulethela isithembiso sokubaleka ukuphelisa u-2017 kwaye uqale u-2018 ngendlela eyahlukileyo: Qalisa unyaka eParis ngale nto incinci.
Ibhiyozelwa njani iKrismesi emhlabeni?
NguDisemba 24, Eva ngeKrisimesi. Kuwo wonke umhlaba abantu abazizigidi ezingama-2.200 XNUMX ...
Ndwendwela u-Oslo, yintoni oza kuyibona nokwenza kwikomkhulu laseNorway I
Fumanisa into onokuyibona uyenze kwikomkhulu laseNorway, i-Oslo Isixeko esigcwele iimyuziyam kunye notyelelo oluhle lokwenza.
Ukufumana ukonwabela iKrisimesi kwindawo eyahlukileyo
Sithetha ngezinye iindlela zokuzonwabisa ezinokonwabela ngexesha leKrisimesi, kwiindawo ezihlala kule mihla ngendlela ekhethekileyo.
Yazi amasimi ekofu amandulo eCuba, imbali kunye neencasa
Uya eCuba? Ungahlali elunxwemeni, yenza ukhenketho lwe-eco! ECuba kukho amasimi amadala ekofu okutyelelwa kuwo ngelixa uhamba kumhlaba omhle.
Iilekese zekrisimesi eziqhelekileyo eSpain
Xa sihamba zikho iindlela ezahlukeneyo zokwazi ilizwe, nokuba linembali, imbali yalo, ubugcisa balo okanye ...
Ukutyelela okubalulekileyo kwe-16 eSardinia II
Sikubonisa utyelelo lokugqibela olubhozo lokugqibela kwesi siqithi sihle saseSardinia, ukusuka kwiidolophu ezincinci ukuya kwiidiphozithi.
Ukutyelela okubalulekileyo kwe-16 eSardinia I
Fumanisa ukutyelelwa okumbalwa kwesiqithi saseSardinia, indawo egcwele iilwandle, izixeko ezintle kunye needolophu ezinembali.
Iindawo ezi-5 ezizodwa zokundwendwela ngeenyawo
Umhlaba ugcwele iindawo ezisikelelwe ngobuhle obukhethekileyo kwaye uninzi lwazo lukwindawo ezikude ...
IAlgarve izixeko zokundwendwela emazantsi ePortugal
Ezi zezinye zezona zixeko zibalulekileyo needolophu kumazantsi ePortugal, eyaziwa ngokuba yiAlgarve, indawo ebakhenkethi kakhulu.
Lungisa izicwangciso zakho kwikhephu nabantwana
Lungiselela omnye unyaka izicwangciso zakho zokuya kwikhephu nabantwana. Iholide eyonwabisayo yosapho lonke kwiindawo zokutyibilika ekhephini
Zeziphi iimpazamo esihlala sizenza xa sihamba?
Inqaku langeCawa lanamhlanje sikuxelela ngeempazamo esihlala sizenza xa sisiya kwindawo entsha. Musa ukuphinda ubabethe!
Iidolophu ezi-5 ezinomtsalane eRías Baixas yaseGalicia
Fumana iidolophu ezintlanu ezinomtsalane kwiRías Baixas yaseGalicia, indawo egcwele iidolophu eziselunxwemeni ezinobuntu obukhulu.
Olona luhlu lwadlalwayo lubalaseleyo ngelixa useluhambeni
Kwinqaku lanamhlanje sikubonisa olona luhlu lokudlala luhamba phambili. Ungaphoswa ngumculo omnandi kuhambo ... Ngaba siya kudlala?
Ama-20 ezikhumbuzo atyelelweyo kwihlabathi II
Fumanisa ezinye izikhumbuzo ezilishumi ezingafanele ziphoswe kuhambo lwethu kwihlabathi liphela, kubandakanya izixeko zakudala.
20 yezona ndawo zityelelwe kakhulu kwihlabathi I
Namhlanje sikubonisa izikhumbuzo ezilishumi eziphezulu emhlabeni esicinga ukuba kufuneka uzindwendwele, uluhlu lweendawo ezinomtsalane.
Iindawo ezisi-7 ezingaziwayo ePortugal
Fumana iindawo ezisi-7 ezingaziwayo ePortugal, iindawo ezinomdla ongathandwayo kodwa ezingabalulekanga.
Ngaba ungathanda ukwazi iLisbon kwimpelaveki ezayo kaDisemba?
Ngaba ungathanda ukwazi iLisbon kwimpelaveki ezayo kaDisemba? Namhlanje sikuzisa eli cebo lihle lokwazi ikomkhulu lesiPhuthukezi.
4 zokufikela kufuneka utyelele Portugal
Sikuxelela ukuba zeziphi iindawo ezine ezibalulekileyo zokundwendwela ePortugal. Izixeko ezine ezintle ezinezikhumbuzo kunye neendawo zendalo.
Izinto zokwenza eMallorca ebusika
IMallorca sisiqithi sasehlotyeni, kodwa ngexesha eliphantsi kunokuba yindawo elungileyo yokufumana izikhumbuzo zayo eziphambili.
O Camiño dos Faros de Galicia kwizigaba ezisibhozo II
Sele sizibonile izigaba ezintathu zokuqala ze-O Camiño dos Faros, indlela eyodwa ecaleni konxweme lwaseGalician ethi…
'O Camiño dos Faros' eGalicia ngezigaba ezisibhozo mna
I-Camiño dos Faros yindlela entle yokunyuka intaba eGalicia ebaleka kunxweme olusemantla phakathi kweendawo ezintle zomhlaba.
Amanxweme anemibala, kuzo zonke izinto ozithandayo
Iilwandle azikho nje ngegolide okanye ezimhlophe. Kukho oluhlaza, obomvu, omnyama, opinki. Ngumcimbi wokuphakamisa ukuba ubazi kwaye ubonwabele bonke. Unobuganga?
Iindawo ezi-5 ezizodwa zokundwendwela eGalicia
Sikubonisa iikona ezintlanu ezizodwa zeGalicia ekufuneka wonke umntu azindwendwele ngamanye amaxesha, ukusuka ezixekweni ukuya kwiindawo zendalo.
Yazi iIreland ngeentsuku ezisi-8 ukusuka kwi-344 euros
Ukuba ufuna ukutyelela ilizwe elihle, apha sikuphathela isipho esihle kwiintsuku ezimbalwa ezizayo: Yazi iIreland ngeentsuku ezisi-8 ukusuka kwi-344 euro.
Izinto onokuzibona nokuzenza kutyelelo lwakho eScotland
Fumana izinto ezinomdla ukuzibona nokuzenza eScotland, ilizwe eligcwele iimfihlakalo, imbali kunye neendlela ezigcwele iinqaba.
IDublin yasimahla, izicwangciso kunye nemibono ukonwabela ngaphandle kokuchitha
Fumanisa iDublin simahla, indlela yokonwabela ikomkhulu laseIreland ngaphandle kokuchitha, kwabo bahamba kuhlahlo-lwabiwo mali olucuthiweyo.
Yazi iBali ngeentsuku ezili-10 ukusuka kwi-1.141 euro
Yintoni isivumelwano: Yazi iBali ngeentsuku ezili-10 ukusuka kwi-1.141 euro! Esi sipho simangalisayo sivela kwisandla seDestinia. Ngaba uza kundwendwela isiqithi?
I-Leeuwarden kunye neValletta, iiNhloko zeYurophu zeNkcubeko 2018
Ifunyenwe iiyure ezimbini ukusuka eAmsterdam, isixeko saseDatshi saseLeeuwarden sithandwa kumachibi aso kunye nemijelo ngokunjalo ...
I-León, ikomkhulu laseSpain leGastronomy 2018
I-León, ikomkhulu laseSpain le-Gastronomy 2018, indlalifa kuleyo ibikunyaka ophelileyo: Huelva. Zeziphi iimveliso ezinophawu eLeón?
Izimvo zokubaleka ngeHalloween
Fumanisa ezinye izimvo zebhulorho yaseHalloween yokubaleka ukuze wonwabe kwaye woyike izicwangciso.
Ndwendwela uFlorence ngo-Okthobha
Ngaba uya e-Itali kule nyanga? Okthobha yinyanga entle eneentsuku ezishushu. Qiniseka ukuba undwendwela uFlorence njengoko kukho imithendeleko emininzi eyonwabisayo ngo-Okthobha.
Iindawo eLondon mhlawumbi ubungazi
Fumanisa ezi ndawo zingaziwayo kwidolophu yaseLondon, undwendwelo olugqitha kwizindululo zabakhenkethi.
IColosseum iya kuvulela amanqanaba ayo aphezulu eluntwini okwesihlandlo sokuqala kwiminyaka engama-40
Umiselwe nguVespasian wagqitywa ngunyana wakhe uTitus ngo-80 AD, iColosseum luphawu lwe…
Iingcebiso ngokulungiselela ityesi yakho yohambo
Fumanisa ezinye iingcebiso ezinomdla zokulungiselela ityesi yeehambo esizenzayo, nayo yonke into oyifunayo nebalulekileyo.
Izizathu zokundwendwela iGalicia ngexesha lokuwa
Fumana ezinye zezona zizathu zibalaseleyo zokundwendwela iGalicia ngexesha lokuwa, kunye nezinto ezininzi ozozibona nokuzenza.
Ungathanda ukuya kwenye yezi ndawo zipholileyo?
Umbuzo esikubuza wona namhlanje ulula kakhulu: Ngaba ungathanda ukuya kwenye yeendawo ezibandayo? Ngowuphi osele ukhe waya kuye?
Ucwangcisa njani uhambo lwabadala
Fumanisa ukuba ungaluceba njani uhambo lwabadala, ucinga ngeenkcukacha ezincinci ukuze bonwabele iiholide zabo.
Iindawo ezinomdla eGran Canaria
Fumanisa ezi ndawo zibalulekileyo zomdla kwisiqithi saseGran Canaria, isiqithi esineendawo zendalo, amaziko embali kunye neesayithi.
Yonwabela iCheste MotoGP Grand Prix ukusuka kwi-189 yeerandi
Namhlanje sikuzisa isithembiso esahlukileyo, esilungele abo balandeli bezithuthuthu: Cheste Moto GP Grand Prix ukusuka kwi-189 yeerandi.
IMyuziyam yaseThyssen ibhiyozela isikhumbuzo seminyaka engama-25 kule-Okthobha
Kwi-Paseo del Prado eMadrid uyakufumana into eyaziwa njenge 'unxantathu wobugcisa' okanye ...
Isibonelelo sePuente del Pilar: Inqwelomoya kunye nehotele eLondon ngee-euro ezingama-320 kuphela
Namhlanje sikuphathela isibonelelo sokuhamba esimnandi kakhulu sePuente del Pilar: Inqwelomoya kunye nehotele eLondon ngee-euro ezingama-320 kuphela. Ubhalisile?
Izinto ezili-9 zokuzibona nokuzenza eTououse
Fumana izinto ezili-9 ezinomdla ukuzibona nokuzenza eTououse, isixeko esihle saseFrance esigcwele iimyuziyam, ubugcisa kunye nezakhiwo ezintle.
I-Ryanair yandisa iinqwelomoya zayo ezirhoxisiweyo kude kube ngoMatshi 2018
IRyanair iyayenza kwakhona: yandisa iinqwelomoya zayo ezirhoxisiweyo kude kube ngoMatshi 2018. Apha sikuxelela ukuba zeziphi iindlela ezingama-34 eziza kuchaphazeleka koku kucinywa.
Ukutyelelwa okubalulekileyo oku-6 kwisixeko saseFlorence
Fumana amatyelelo amathandathu abalulekileyo kwisixeko sase-Itali saseFlorence, enye yeendawo ezityelelweyo kubugcisa bayo nazo zonke izikhumbuzo.
Izinto zokwenza simahla kwisixeko saseLisbon
Yonwabela izinto ezahlukeneyo zasimahla kwisixeko saseLisbon. Lungisa uhlahlo-lwabiwo mali ngokongeza le misebenzi yasimahla kuhambo.
Ezi zezinye zeenqwelomoya eziye zarhoxiswa yinkampani yeRyanair
Ezi zezinye zeenqwelomoya eziye zarhoxiswa yinkampani yeRyanair. Uluhlu lwethu luya kude kube ngo-Okthobha u-1 kodwa sibeka ikhonkco kuye wonke umntu.
Sikunika iimbono ezimbalwa zokucwangcisa uhambo lokuya kwesinye seziqithi ezithandwayo zaseYurophu ngalo mzuzu, ukusuka eIbiza ukuya eKrete.
Ukusuka eSeville ukuya eRoma, uhambo olujikelezayo, kwii-euro ezili-169 kuphela. Enjani yona into!
Unikelo lwanamhlanje "lunencindi": Ukusuka eSeville ukuya eRoma, uhambo olujikelezayo, kwi-euro ezili-169 kuphela. Ukuhamba neRyanair ukusuka eSkyscanner.
Ibhotwe le-Infante uDon Luis de Boadilla del Monte
Esinye sezikhumbuzo ezingaziwayo zaseSpain yiPalacio del Infante don Luis eBoadilla del Monte. Iyafumaneka…
Uyikhetha ngokuchanekileyo indawo yokuhlala xa useluhambeni
Fumana ezinye izimvo malunga nokuba ungalukhetha ngokuchanekileyo uhlobo lwendawo yokuhlala kuhambo ngazo zonke iindlela ezikhoyo namhlanje.
Yintoni omele uyenze kwaye uyenze kwisixeko saseBrussels II
Fumana izinto ezingakumbi onokuzibona nokuzenza kwisixeko saseBrussels. Ezinye iindawo zokongeza kuluhlu kunye neepaki ezinkulu, amabhotwe kunye neemyuziyam.
IAlhambra eGranada ivula iTorre de la Pólvora kuluntu ngoSeptemba
Njengoko ibisenza njalo ukusukela ngentwasahlobo ephelileyo, iBhodi yeTrasti yeAlhambra kunye neGeneralife yaseGranada ivulela uluntu ...
Yintoni omele uyenze kwaye uyenze kwisixeko saseBrussels I
Fumanisa ukuba yintoni oza kuyenza kwaye uyenze kwisixeko saseBrussels, isixeko esingokwembali nesale mihla sigcwele iindawo ezinomdla kunye notyelelo olubalulekileyo.
Iingcebiso zokonwabela ukuphuma kwimpelaveki
Fumana ezinye iingcebiso ukonwabela ukuphuma kwempelaveki nangaliphi na ixesha, unezimvo ezintle ngokuthatha uhambo.
Iindawo ezigqibeleleyo zokutyelela eYurophu ngokwe-TripAdvisor
Siza kubona ezinye zeendawo zabakhenkethi ezinomdla eYurophu, ezinezikhumbuzo kunye neendawo ezibalulekileyo kubakhenkethi.
Ezona ndawo zibalaseleyo kubakhenkethi eSpain ngokwe-TripAdvisor
Fumana ezona ndawo zibalaseleyo zokhenketho eSpain ngokwe-portAdvisor portal. Iindawo ekufuneka sizibhale phantsi ukuze sibaleke ngokulandelayo.
Iindawo ezi-5 okanye izikhumbuzo ezisongelwa kukutshintsha kwemozulu
Izazinzulu kwihlabathi liphela ziqikelele ukuba ngonyaka wama-2100 amanqanaba elwandle anokuphakama abeke ...
Iingcebiso zokuthintela ukuTyhefu kokutya kwiholide
Ngeli xesha lonyaka, ukuhamba phesheya kuqhelekile, ngakumbi kwiindawo ezikude nezingaqhelekanga. Ngcamla i ...
Iindawo ezinomtsalane zokundwendwela eFrance
Fumanisa iindawo ezintle nezithandekayo ezibekwe eFrance, ukusuka kwindlela esuka kwiinqaba ukuya kwiidolophu zakudala kunye needolophana zelali.
Uthethathethwano: Iinqwelomoya ezijikelezayo ukuya eParis ukusuka kwi-32 euro
Kwisithembiso sanamhlanje sikuphathela isithembiso sokwenyani: Iinqwelomoya ezihamba ngeenxa zonke ukuya eParis zisuka kwi-euro ezingama-32 ezivela kwizikhululo zeenqwelo moya zaseSpain.
Sikubonisa ezinye zeyona dolophu intle kunxweme lwaseAndalusia. Ukukhethwa kweedolophu ezincinci ukutyelela.
Yintoni omele uyenze kwaye uyenze kwisixeko saseBelfast
Fumanisa yonke into oyibonayo noyenzayo kwisixeko esikhulu saseBelfast, kunye noshishino kunye nengxaki eyadlulayo, namhlanje sisixeko sanamhlanje.
Iindawo zokundwendwela oku kuwa
Fumanisa izimvo ezimbalwa zokukhetha indawo ekuya kuyo ukuwa, ukusuka kwiipaki zendalo, ukuya kumanxweme okanye kwizixeko zaseYurophu.
I-Peru iya kuthintela ukufikelela kwi-Machu Picchu ukuyikhusela kukhenketho oluninzi
Kutshanje sithethe ngendlela urhulumente waseVenice athabathe uthotho lwamanyathelo okukhusela iPlaza ...
IAlhambra eseGranada ivula iigadi zeGeneralife simahla
Ukusukela ngentwasahlobo ephelileyo, abathandi beAlhambra eGranada abayekanga ukuba neendaba ezimnandi ngokunxulumene ...
Iingcebiso zokulungiselela ukwenza iCamino de Santiago
Sikunika iingcebiso ezimbalwa eziluncedo ukulungiselela ukwenza iCamino de Santiago kwezinye zezigaba zayo ezintle.
Izizathu zokukhetha indawo yasemaphandleni kwikhefu lakho
Fumana ezinye zezona zizathu zibalulekileyo zokukhetha indawo yasemaphandleni kwikhefu lakho elilandelayo, indawo ethe cwaka kwindalo.
Izicwangciso zothando eMadrid
IMadrid sisixeko esinika izinto ezingapheliyo ukuba sizibone kwaye sizenze kwaye ukuba sihamba njengesibini ...
Iyintoni intsingiselo yemibala yepaspoti?
Xa usenza uhambo lokuya phesheya, incwadi yokundwendwela yileta yethu yokwazisa. Ulwazi oluqulathe ...
Ukuhamba ngenqanawa, iingcebiso ezifanelekileyo
Ukuhamba ngenqanawa ngamava amatsha, ke kufuneka sazi izinto ezimbalwa kwangaphambili. Sikunika iingcebiso ezifanelekileyo.
Iindawo ezili-16 ezilungileyo zasehlotyeni eMadrid
Abo banethuba lokuchitha iintsuku ezimbalwa eMadrid ngexesha lasehlotyeni baya kuba nakho ukuqinisekisa ukuba ubusuku ...
Ezona lori zokutya zibalaseleyo eNew York
I-classic xa ifika ekudleni eNew York iilori zokutya. Ukutya esitratweni, kodwa ngazo zonke incasa zehlabathi kunye namaxabiso amahle.
Iingcebiso ezifanelekileyo zokuya eRoma
Isixeko saseRoma yindawo ekutsala kuyo amawaka abakhenkethi minyaka le, kwaye ayimangalisi loo nto ...
Ndwendwela iindawo ezahlukeneyo eSpain apho uMdlalo weTrone ubhalwe khona
Ndwendwela iindawo ezahlukeneyo eSpain apho uMdlalo weTrone ubhalwe khona: IGuadalajara, Girona, Seville, Cáceres, Peñíscola, njl.
Yintoni irhafu yabakhenkethi kwaye isetyenziswa phi eYurophu?
Ngexesha lenyanga kaJulayi, iBarcelona yavuma irhafu entsha yabakhenkethi, eya kudityaniswa nezo ...
Isixeko saseMexico 'esikwinqanaba loku-1' lendawo yokuHamba + yokuNika iMagazini
Kwinqaku lanamhlanje sikuphathela iindaba zakutshanje zabahambi: Isixeko saseMexico 'esikwinqanaba loku-1' kuluhlu lweMagazini yokuHamba + yokuBala.
Iidolophu ezili-9 ezinomtsalane zokubaleka
Fumana ezi dolophu zithandekayo zili-9 ezikwijografi yaseSpain, iikona ezincinci apho kunokubona khona xa ubaleka.
Ukuhamba ngenqanawa iintsuku eziyi-8 ukuya kwi-MSC Splendida ukusuka kwi-euro ezingama-649
Ukuba uhlala ufuna ukuhamba ngenqanawa kwaye uhambe ngezixeko zaseSpain nase-Itali, eli lithuba lakho. Ukusuka kwi-euro ezingama-649 kunokuba yeyakho!
Iidolophu ezinomtsalane ezingama-20 eGalicia II
Fumana ezinye iidolophu ezilishumi ezinomtsalane eGalicia kolu khetho lwesibini lweendawo ezincinci zokundwendwela kweli lizwe lihle.
Ukusela phi i-vermouth eMadrid njengekati yokwenyani?
Nabani na okhe wahlala eMadrid okwethutyana uyakukubona ukusela ivermouth okanye ivermouth kwi ...
I-7 yeNdawo eNgaqhelekanga yabakhenkethi
Ukuhamba ngamava atyebisa kakhulu. Ivula ingqondo kwaye ivumela ukwazi ezinye iindlela zokuphila. Zonke izizwe ...
Iidolophu ezinomtsalane ezingama-20 eGalicia I
Fumana ezilishumi kwiidolophu ezingama-20 ezithandekayo eGalicia. Iindawo ezinendawo eninzi yokubonelela ngeekona ezincinci.
Iingcebiso kunye nezizathu zokuba ubhaka ubuye
Fumanisa ezinye izizathu kwaye ngaphezulu kwazo zonke iingcebiso ezimbalwa ukonwabela uhambo lobhaka, amava amatsha.
Iindawo ezi-8 emhlabeni azivumelekanga kwabasetyhini
Ukutyhubela imbali, ngelishwa abasetyhini babecalulwa ngenxa yesini sabo kwaye ngaphandle ...
Iimpahla eziqhelekileyo ze-ecuador
Fumanisa iimpahla eziqhelekileyo ze-Ecuador ngokuxhomekeke kwindawo leyo. Banxiba njani abaphambukeli abaya apho? Fumanisa!
Ukuxoxa malunga nokwazi iPrague kunye neBudapest: Ukusuka kwi-euro ezingama-378, indawo yokuhlala kunye neenqwelomoya
Kwinqaku lanamhlanje sikulethela isibonelelo sokuhamba ukungena entliziyweni yeYurophu: Yazi iPrague neBudapest: i-euro ezingama-378, indawo yokuhlala kunye neenqwelomoya
Izicwangciso zokonwabela iiholide nabantwana
Nandipha izicwangciso ezahlukeneyo ukonwabela iholide nabantwana. Ezi zizicwangciso ezifanelekileyo ukuba siza kuhamba nosapho.
Yazi inkcubeko yamaNdiya kwaye ufumane amasiko abantu abangamaHindu ngokwenkolo, i-gastronomy, imithendeleko kunye nenkcubeko yamaHindu.
Fumana iindawo ezisixhenxe ezintle zendalo eYurophu ukuphoswa kwiholide yakho elandelayo, ukusuka kwiintlango ukuya kumachibi nakwiilwandle.
Fumana isinxibo esiqhelekileyo saseBrazil, kunye neempahla abazinxibayo ngokuxhomekeke kwixesha lonyaka nakwindawo. Yintoni ilokhwe yaseBrazil? Yifumanise apha!
Ezona passport zilungileyo nezona zimbi zokuhamba ehlabathini
Enye yezona zinto ziphambili kubakhenkethi xa usiya phesheya ingaba uya ...
Izinto ekufuneka uzenzile eGalicia ehlotyeni
Fumana zonke izinto ezinomdla nezonwabisayo onokuzenza eGalicia ehlotyeni, indawo ekuyiwa kuyo ngokuxhaphakileyo.
I-Durian, esona siqhamo sinukayo emhlabeni
IDurian ithathwa njengesona siqhamo sinukayo emhlabeni, yintoni ivumba laso elibi? Sikuxelela zonke iimfihlelo zesi siqhamo sinuka kakubi.
Ukuya ePunta Kana ngee-euro ezingama-690 kuphela, zonke zibandakanyiwe
Uhambo oluya ePunta Kana ngee-euro ezingama-690 kuphela, zonke zibandakanyiwe kwesi sibonelelo sikukhethele sona kwiwebhusayithi yeRumbo.
Uyikhathalela njani impilo yosapho ngexesha lohambo
Fumanisa ezinye izimvo zokukhathalela impilo yosapho ngexesha lohambo. Kubalulekile ukuba uthathe ingqalelo kwanezona nkcukacha zincinci.
Iingcebiso zokufumana iinqwelomoya ezingabizi kakhulu
Namhlanje sibonisa uthotho lweengcebiso zokufumana iinqwelomoya ezingabizi kakhulu. 5 iyonke ayizukugcina imali kuphela kodwa nexesha.
Iingcebiso zokuhamba nenja yakho kwihlabathi liphela
Sikunika iingcebiso ezimbalwa zokuhamba nenja yakho kwihlabathi liphela, izimvo ezinokwenza kube lula kuwe ukuba uye ekhefini kunye nesilwanyana sakho sasekhaya.
I-WorldPride Madrid 2017, isikhokelo esichazayo kumaqela oQhayiya
Ukusukela nge-23 ukuya kwi-2 kaJulayi, iMadrid kuninzi okunokubhiyozela. Ngaphantsi kwesiqubulo esithi "Thanda umntu omthandayo, iMadrid iya ...
Bhabha kwaye uhlale eTenerife ukusuka kwi-euro ezingama-118 ngeDestinia
Kule ntengiso namhlanje sicebisa ukuba uhambe uye eTenerife: Bhabha kwaye uhlale eTenerife ukusuka kwi-euro ezingama-118 ngeDestinia. Fumana uninzi lweholide yakho!
Tyelela izixeko ezikufutshane nePorto
Sikubonisa ezinye izimvo ezinomdla zokwenza iidolophu ezikufutshane nePorto, iindawo ezinomdla kakhulu ezinokutyelelwa ngosuku olunye.
Yintoni omele uyenze kwaye uyenze kwisixeko saseMalaga
Isixeko saseMalaga ngumanyano olufanelekileyo lwezikhumbuzo, iimyuziyam kunye nokuzonwabisa kunye nolwandle kunye nezitalato zokuthenga apho unokuchitha khona usuku.
Iintsuku zehlobo eBratislava
Ngaba unomdla kwiBratislava? Ngaba kuvakala kuyimfihlakalo kunye namaXesha Aphakathi? Ke, yindwendwele kuba ngekhe uphoxeke: iinqaba, iicawa, amachibi kunye nemiboniso yexesha eliphakathi.
Izinto zokuzibona nokuzenza eHamburg
Fumana zonke izinto onokuzibona nokuzenza kwisixeko saseJamani iHamburg, isixeko esinomdla esinotyelelo oluninzi olubalulekileyo.
Iingcebiso zokuhamba ngololiwe kwakhona
Fumanisa ezinye iingcebiso kunye nezibonelelo zokuhamba ngololiwe, isithuthi esingadumanga kangako, kodwa kunokuba lukhetho olufanelekileyo.
Iivenkile ezilungileyo kwiFifth Avenue yaseNew York
Ngaba uza kutyelela eNew York kwaye ufuna ukwazi ukuba zeziphi iivenkile ezilungileyo kwiFifth Avenue eyaziwayo? Ewe, ungaphoswa sisikhokelo sethu xa uyokuthenga kwi-NY
Izinto ozozibona nokuzenza kwiRiviera Maya
Kwi-Riviera Maya kukho izinto ezininzi onokuzibona nokuzenza, ukusuka ekuntywila kwiingqaqa ukuya kutyelela amabhodlo kaMayan, ukunyuka iipiramidi okanye ukuqubha kwi-cenotes.
Iilwandle ezili-10 eSpain zilahlekile kweli hlobo
Fumanisa iilwandle ezilishumi ezinkulu eSpain esingathanda ukuziphosa kweli hlobo. Iiarnales ezisuka emantla ziye emazantsi zidlula kwiziqithi.
ICathedral-Mosque yaseCórdoba yeyona ndawo inomdla kubakhenkethi eYurophu 2017
ISpain lelinye lamazwe atsala abakhenkethi minyaka le enkosi ngokudityaniswa kweyona gastronomy, inkcubeko, ...
Iindawo oza kuzibona kutyelelo lwase-Edinburgh
Fumanisa zonke iikona esizicebisayo ukutyelela e-Edinburgh, isixeko esigcwele umtsalane kunye nezikhumbuzo.
Iingcebiso zokwenza uninzi lwenqwelomoya ende
Sikunika iingcebiso ezimbalwa zokwenza uninzi lwenqwelomoya ende. Eyona ndlela yokuhamba nazo zonke iiyure kwindiza.
Ukufumanisa iNicaragua, iparele eMbindi Merika
Zimbalwa iindawo ekuhanjwa kuzo ezixhaphakileyo kwezokhenketho kwaye zintle kwaye zinomoya wokubuk 'iindwendwe njengeNicaragua. Kukho okukuhle kakhulu ...
Umboniso weNcwadi waseMadrid wango-2017 uvule iingcango zawo
Omnye unyaka uMboniso weNcwadi waseMadrid uvula iingcango zawo ePaseo de Cocheros del Parque del ...
Iikona ezikhethekileyo kwiGalician Rías Baixas
Siza kufumanisa ezinye zeekona ezikhethekileyo zeGalician Rías Baixas, ezineengxangxasi, iziqithi neenqaba zokundwendwela.
Iingcebiso zokonwabela iiholide zakho elunxwemeni
Fumanisa ezinye iingcebiso ezilula ukonwabela iholide yakho elandelayo elunxwemeni. Izimvo zokuba yonke into ilungiselelwe kwaye ungothuki
Uhambo olujikelezayo ukusuka eMadrid ukuya eHavana nge-euro ezingama-640 kuphela
Unikelo lweveki yanamhlanje luthiwa thaca kuwe yi-eDreams: uhambo olujikelezayo ukusuka eMadrid ukuya eHavana ngee-euro ezingama-700 kuphela. Enjani yona intengiselwano!
Kuthekani ukuba sihamba ukuze siphile?
Kwinqaku lanamhlanje senza ukuba ucinge kwaye ubonakalise ... Yeyiphi indawo yejografi onokukhetha ukungahambi nje kuphela, kodwa nokuhlala?
5 iimyuziyam ezimnandi zokundwendwela abantwana kunye neengcebiso zokwenza oko
Ngomhla we-18 kuMeyi, uSuku lweMyuziyam lwaMazwe ngaMazwe lwalukhunjulwa, umhla ogqibeleleyo wokukhumbula ukuba ...
Ukutyelela kwisixeko saseBologna e-Itali, ubone ntoni
Fumanisa ukuba uza kubona ntoni eBologna xa undwendwele isixeko esasikade sigcwele iinqaba kwaye sisaziwa ngee-arcades.
Ezona zilwandle zibalaseleyo eSeychelles
Siya kwii-archipelago zaseSeychelles ukuze sizazi ezinye zezona zilwandle zibalaseleyo, ezona zibalulekileyo ekufuneka sizindwendwele kwaye sizazi
Uloliwe kaPilgrim lubuyela ukwenza iCamino de Santiago ngo-2017
Ukususela kumaxesha amandulo, ukuya kwiindawo ezingcwele kuqhelekile kwiinkolo ezininzi. Olu hambo lwalunentsingiselo ...
Ngalo mnikelo, bhukisha ihotele eCórdoba kwaye undwendwele ubulungisa bayo
Ngalo mnikelo, bhukisha ihotele eCórdoba kwaye undwendwele ubulungisa bayo, phakathi kwezinye izinto ezininzi ezimangalisayo ezikugcinela isixeko, ezinje nge-mosque yayo.
Yintoni ongayibona kwisixeko saseNtaliyane iSiena
Fumanisa yonke into onokuyibona kwiintsuku ezininzi kwisixeko sase-Itali saseSiena, isixeko esaziwayo ngomnyhadala we-Palio.
Yintoni omele uyenze kwaye uyenze e-Aix-en-Provence, eFrance
Idolophu encinci yeAix-en-Provence yindawo enomtsalane kumazantsi eFrance, inokubona nokwenza.
I-Spicy kwaye iyamnandi kakhulu, le Greek gastronomy
Ukutya kweMeditera kuyafana nokutya okusempilweni kunye nokulinganisela okubonelela ngezibonelelo ezahlukeneyo zempilo kwabo ...
Iinqwelomoya ezingabizi kakhulu ukuya ePalma de Mallorca, ukujikeleza, kunye ne-eDreams
Iinqwelomoya ezingabizi kakhulu ukuya ePalma de Mallorca, ukujikeleza, kunye neeDreams ... Yazi iMallorca ukuba awukenzi oko ngesi sipho simnandi.
Ukuya eCarcassonne, eFrance, yintoni ongayibona
Isixeko saseCarcassonne okanye iCarcassonne sikumazantsi eFrance kwaye sisixeko esilondolozwe kakuhle kwaye sihle kakhulu phakathi kwesixeko.
Izinto zokuzibona eFuerteventura
Fumanisa uninzi lwezinto onokuzibona nokuzenza kwisiqithi saseFuerteventura, ukusuka kumanxweme ukuya kubume bendalo kunye needolophu ezipholileyo.
Iingcebiso zokonga ngexesha leeholide
Sikunika amaqhinga alula ukuze ukwazi ukugcina xa ucwangcisa kunye nokonwabela iholide elandelayo, naphi na.
Ukutya oku-5 ongenakukuyeka ukuzama eBuenos Aires
Buenos Aires? Ukutya! Njengesixeko sabaphambukeli, zonke iicuisine zimelwe, kodwa yalatha ezi zinto zintlanu zingenakuphikiswa.
Iingcebiso zokuqasha imoto ngexesha leeholide zakho
Fumanisa zonke iinkcukacha ozifunayo ukuze uqeshe imoto ngexesha leeholide zakho, ekukhetheni inkampani kwi-inshurensi.